Siddee Ayaynu u Gaadhi Karnaa Horumar Nafeed? |
Soohdinta Sarkaalka Dadweynaha ee Xilliga Doorashada |Tukesomalism.com
Marka ugu horraysa ee aad doonaysid in aad horumarisid naftaada waa in aad ogaataa qofka aad tahay. Marka aad taa ogaatid adigu waxa aad bilowdaa in aad horu marisid naftaada, taas waxaan uga jeedaa waa in aad barataa ama ogaataa naftaada waxa ay ku fiicantahay iyo waxa ay ku xuntahay, markaas ayaad horumar gaadhi kartaa. Horumar laguma gaadho waxa aad doonaysid ee waxaa lagu gaadhaa wadada aad u maraysid, waayo dadka adduunka jooga oo dhammi way doonayaan in ay horumar gaadhan, laakiin waxa kala duwan wadadii loo marayey iyo qaabkii loo raadinayey.
Horumarka noloshu waxaa uu ka bilaabma qofka aad adigu tahay. Muhiim maaha waxa hareerahaaga yaalla, Waxaa mihiim adiga awoodda kugu jirta, hana isku dayin in aad istidhaahdid nolosha horumarkeeda waxa ku suurra gelinayaa waxa hareerahaaga yaalla. Ta ugu muhiimsanna waa shakhsiyaddaada.
Nolosha adduunka wax badan aya qofka ku xeeran. Waa meel nolosha adduunku wax aad uu badan aya ku xeeran tahay, Waxa ay ka bilaabmaysa qofka reerkadariska, magaalaadada waddankaaga, qaaraddaada ilaa adduun waynaha, sidaas ayey isugu wada xidhantahay, waa wareeg noloshu waanay isku wada xidhantahay, qof walbana waxa loo baahanyahay in uu kaalintiisa buuxiyo, mana dhammeystirmayso isaga oo qof waliba kaalintiisa buuxiya mooye.
Noloshuna waxa ay hagaagaysaa marka aad adigu aqoonsantahay in aad noloshaada hagaajin karto, mana jirto cid kale oo ku hagaajinaysa marka aad adigu go’aansato in aad taada hagaajiso ta reerkaaga iyo ta bulshada kale hagaajiso, markaas aya uu imanayaa horumarka nololeed, sidaasayna isugu wada xidhanyihiin oo midiba mid ugu tiirsanyahay.
Taasina waxa ay ku imanaysa marka ka go’naansho la helo ee qof waliba xaggiisa iska toosiyo, hana isku dayin in aad adiga oo taadiiba toosin aad cid kale la yaabto oo aad is tidhaahdo qofkani muxuu waxan u sameeyey, waayo adiguba iskama warhaysid, marka waa in aad taada ka bilowdaa, oo aad iska jirtaa in aad tidhaahdid Illaahay imasiin waxa uu dadka kale siiyay, ee waxaad xusuusnaataa in qof walba Allah siiyay wax ugaar ah oo uu kaga horreeyo dadka kale.
Majiro qof dhinac walba ka dhameystiran, waxa se ay tahay in aan ogaanno haddii shay aynnu ku fashilanno in uu jiro mid aynnu ku guulaysan karno. Isku day goob kasta oo aad ka qaybgasho in aad jiritan ku yeelato, aragtidaadana ka dhiiban karto, si ay naftaadu ula qabsato, dabadeedna ay ku noqoto arrin iska caadiya oo kuu fudud.
Alle tala saaro oo ku kalsoonow waxanad ogaata in wax waliba gacantiisa ku jiraan, hana ka biqin mustaqbalkaaga iskana jir dadka riyooyinkaaga iyo hamikaga hor istaagaya ee ku niyad jebinaaya marka ay kuu arkaan adiga oo dedaalaya markaa, dadkaa aad uga digtoonow waana in aad aqoon ahan is-dhisto, aqoontu waa furaha kalsoonida iyo in aad ku dhiirato hawlaha, oo aad sii tababarato.
Tags: Sidee Ayaynu u Gaadhi Karnaa Horumar Nafeed?
Next post Dariiqada Loo Maro Marka La Doonayo in Nafta La Horumariyo
Previous post Qodobada Aad Naftaada Ku Horumarini Karto